Usoro ikpo oku ikuku maka waya ọla kọpa, waya nchara, waya ọla, wdg
Na mmepụta eriri igwe, waya ọla kọpa, waya ọla, na nchara ma ọ bụ kpo oku mkpara mmiri mkpanaka, a na -eji usoro ọgwụgwọ ọkụ dị iche iche, dị ka ịbịaru waya, iwe ọkụ mgbe emepụtara ya, imenyụ ọgwụgwọ okpomọkụ n'ihe ndị pụrụ iche chọrọ, ntinye ntinye tupu iji ya dị ka akụrụngwa, wdg Enwere ọtụtụ arịrịọ ugbu a gbasara ikpo ọkụ n'ịntanetị na ọsọ ọsọ, oke okpomọkụ dị iche iche, mmepụta ike ziri ezi, yana njikwa okpomọkụ na obere wires dayameta; n'ihi ya, usoro kpụ ọkụ n'ọnụ kwesịrị. N'inwe uru nke ọrụ akpaaka dị elu (gụnyere mgbanwe oge, ọnọdụ okpomọkụ, ike), HLQ's induction ngwaọrụ a hụrụ na ọ dabara adaba maka imecha ọgwụgwọ ọkụ nke wires na eriri. Enwere ike ịnakwere njikwa mmalite/nkwụsị, imecha mmezi ike, na -arụ ọrụ awa 24/ụbọchị, na -eduzi nrụpụta ike ngwa ngwa, na imechi ngwa ngwa dịka akara njikwa okpomọkụ si dị, ngwaahịa nrụpụta ọkụ anyị nwere ike mezuo ihe dị iche iche chọrọ nke waya ugbu a. na igwe kpo oku.
Kedu ihe bụ induction wire na cable kpo oku?
HLQ Induction Equipment Co na-enye azịza maka ọtụtụ ngwa sitere na wires arụrụ arụ na nke na-abụghị ferrous, eriri ọla kọpa na aluminom na ndị na-eduzi ya na mmepụta fiber optic. Ngwa ndị ahụ sara mbara nke ukwuu gụnyere, mana ọnweghị oke na, ịkpụ, ibe ya, ọgwụgwọ ọkụ, galvanizing, mkpuchi, ịbịaru wdg na ọnọdụ okpomọkụ site na ogo 10 ruo ihe karịrị ogo 1,500.
Enwere ike iji sistemụ dị ka ngwanrọ kpo oku gị niile ma ọ bụ dị ka nkwalite iji melite nrụpụta nke ọkụ dị ugbu a site na ime dị ka onye na -ekpo ọkụ. A na -ama ihe ngwọta kpo oku induction maka kọmpat, arụpụtaghị ya na arụmọrụ ya. Ọ bụ ezie na anyị na -enye ọtụtụ azịza, a na -ahapụrụ ọtụtụ ka ha mezuo ihe ndị ị chọrọ. Mmepe sistemu ahaziri nke ọma maka ihe ị chọrọ site na iji usoro ahaziri iche bụ ọpụrụiche akụrụngwa ntinye aka HLQ.
Ngwa ndị ahụkarị:
Ihicha nhicha ma ọ bụ iwepu mmiri ma ọ bụ ihe mgbaze na mkpuchi
Ịgwọ ihe mkpuchi mmiri ma ọ bụ ntụ ntụ. Na -enye ike njikọ dị elu na imecha elu
Mgbasa nke mkpuchi ọla
Tupu ikpo ọkụ maka extrusion nke polymer na mkpuchi ọla
Ọgwụgwọ ọkụ gụnyere: iwelata nchekasị, iwe iwe, annealing, mgbapụta na -enwu gbaa, isi ike, patenting wdg.
Tupu ikpo ọkụ maka ịkpụzi ọkụ ma ọ bụ ịkpụ ihe, ọkachasị dị mkpa maka alloys nkọwapụta
Ọkụ na-egbuke egbuke a na -ejikwa ya maka ikpo ọkụ, ikpo ọkụ ma ọ bụ mkpuchi nke waya ọla yana njikọta/vulcanization nke mkpuchi ma ọ bụ mkpuchi n'ime ngwaahịa eriri dị iche iche. Ngwa ikpo ọkụ nwere ike ịgụnye waya kpo oku tupu ịdọrọ ya ma ọ bụ wepụ ya. Ịchacha ọkụ mgbe ọ bụla ga -agụnye usoro dị ka njikọta, ịkwa iko, ịgwọ ma ọ bụ ihicha agba, nrapado ma ọ bụ ihe mkpuchi. Na mgbakwunye na ịnye ezigbo ọkụ na ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, enwere ike ijikwa ike nrụpụta nke ike ọkọnọ ọkụ site na akara ahịrị nke sistemụ n'ọtụtụ oge. HLQ na -ekesa ihe ọkụ ọkụ dị iche iche nke induction nke enwere ike iji maka usoro ndị a.
HLQ UHF na MF Series of Induction Heating Systems na -enye ọtụtụ ike dị iche iche site na 3.0 ruo 500kW, nke dabara na arụmọrụ teknụzụ n'ọtụtụ ngwa ndị ahịa. Ejiri ikike tankị na-agbanwe agbanwe na ihe nrụpụta nrụpụta ọtụtụ, HLQ Induction Heating Systems na-agbanwe agbanwe ma nwee ntụkwasị obi iji zute ọnọdụ nrụpụta chọrọ. induction waya kpo oku na akụrụngwa kpo oku.
Categories Technologies Tags waya annealing, mgbanaka ígwè ígwè, waya nchikọta, ntinye ọkụ ọkụ ọkụ, induction ọla waya waya kpo oku, induction ọla kọpa cable, induction waya ọla kọpa, induction ígwè waya kpo oku, induction waya okpomọkụ, induction waya kpo oku, waya kpo oku, kpo oku waya, waya induction kpo oku ngwọta Mail igodo